Ka Fal Celinta iyo Khayraadka COVID-19 - SEIU6
Xubnaha SEIU6 waa shaqaale lagama maarmaanka ah ee safka hore taagan kuwaas oo si qoto dheer u nadiifiya una jeermis dila goobaha ganacsiga iyo bulshada, ilaaliya dhismayaasha oo ka caawiya dadweynaha safmarka iyo had iyo jeer. SEIU6 waxaa ka go’an inay xubnaheenna ka dhigto kuwa baqbad leh oo xog oggaal ah inta lagu jiro waqtiyadan adag, iyo inay xaqiijiso in shaqaalaha lagama maarmaanka ah la ixtiraamo, la ilaaliyo oo mushahar la siiyo.
SEIU6 waxay taageertaa in tallaalka caalamiga ah uu yahay istaraatiijiyad lagu ilaalinayo xubnaheenna, qoysaskooda iyo bulshooyinkooda inay badqab ahaadaan. Midowgeena wuxuu safka hore kaga jiray xaqiijinta in xubnaheenna ay tallaalka helaan, waxaana diyaar u nahay in aan xubnaha ka caawinno in ay fahmaan oo ay sahmiyaan waajibaadka tallaalka.
Halka laga helo tallaalka Washington
Talaallada COVID-19 ayaa ah kuwo badqab ah, lacag la’aan ah oo uu heli karo qof walba oo ah 12 sano jir ama ka wayn. Ma ahan inaad ahaato muwaadin US ama aad la timaato caddeynta xaalada deganaanshaha si aad u hesho tallaalka.
Baaritaan ku samee tallaalka.
Warqadaha, muuqaalada iyo dhigaalada illo lagu kalsoonaan karo oo ah Ingiriis, Amxaari, Shiine, Soomaali, Isbaanish, Fiyatnaamiis iyo qaar kaloo badan.
Hel xaqiiqooyinka ku saabsan COVID-19
Dhigaalada Caafimaadka Fayodhowrka ee Degmada King oo ah Ingiriis, Amxaari, Shiine, Soomaali, Isbaanish, Fiyatnaamiis iyo qaar kaloo badan.
Caafimaadka iyo Badqabka Goobta Shaqada
Waaxda Shaqada iyo Warshadaha ee Washington macluumaadka iyo warbixinada ku saabsan Coronavirus.
Ilaalinta Laga Helo Heshiiska
Nadiifiyeyaasha lagu dabaro Heshiiska Wayn ee Degmada King, ilaalinta COVID-19 ayaa lagaga xaajooday Kordhinta Heshiiska ee Luulyo 2020. Ilaalintan waxaa lagu xoojiyay wada-xaajoodyada Heshiiska ee 2021. Wax badan ka baro ilaalinta nadiifiyeyaasha.
Xarunta Talaalka ee SEIU6
Abriil 17-keedii iyo 18-keedii SEIU6 waxay martigelisay xarun tallaal iyada oo la kaashanaysa Discovery Health. In ka badan 400 oo xubnood oo ku sugan waaxyada garoonka diyaaradaha, ammaanka iyo nadaafadda ayaa la tallaalay, iyaga iyo xubnaha qoyskooda. Madaxweynaha SEIU6 Zenia Javalera ayaa la qaadatay tallaalkeeda xubnaha midowga. Teresa Mosqueda oo ah Xubin ka tirsan Golaha Sharci Dejinta ayaa goobjoog ka ahayd si ay u taageerto shaqaalaha lagama maarmaanka ah ee SEIU6.
Haddaan nahay SEIU6, waxaa naga go’an inaan meesha ka saarno caqabadaha helitaanka tallaalka ee dadka soogalootiga, midowga BIPOC badankood, si markaas dhammaan xubnaha doonaya tallaalka ay awood ugu yeeshaan inay helaan ilaalintan. Wax badan ka ogoow Xarunta Talaalka ee SEIU6.
SEIU6 WAXAY UGU BAAQAYSAA GOBALKA INUU BALAARIYO XAQ U YEELASHADA TALLAALKA EE DHAMMAAN SHAQAALAHA LAGAMA MAARMAANKA AH
Maaddaama Gobolka Washington uu ballaarinayo xaq u yeelashada tallaalka toddobaadka soo socda, ilaaliyayaasha muhiimka ah iyo saraakiisha ammaanka ayaa marlabaad liiska laga reebi doonaa. Iyada oo SEIU6 ay iskaashi la sameysay Building Owners and Managers Association (BOMA) si ay racfaan uga qaataan Guddoomiye Inslee iyo Waaxda Caafimaadka ee Gobolka si loo dedejiyo helitaanka tallaalka ee shaqaalahan, nadiifiyeyaasha iyo saraakiisha ammaanka waxaa loo sheegay inay sugaan. Akhri warbixinta oo dhamaystiran.
U sheeg Congress-ka in Lacagta Dawlada ee loogu talagalay Soo-kabashada COVID ee Garoonka Diyaaradaha ay tahay in La Aadiyo Shaqooyinka Wanaagsan.
Shaqaalaha garoonka diyaaradaha waxay lagama maarmaan u yihiin inay dadka isku xiraan, inay nadiifiyaan diyaaradaheena, iyo ilaaliyaan ammaanka garoomadeena dayaaradaha.
U codso mushahar sare iyo faa’iidooyin wanaagsan shaqaalaha garoomada diyaaradaha.